Trick ‘r Treat (2007) – Channel Myanmar December 9, 2007 (Butt-Numb-A-Thon)
R 2007 1h 22min Horror, Thriller
IMDB: 6.8/10 80,130 votes
Dylan Baker, Lauren Lee Smith, Quinn Lord, Rochelle Aytes
IMDb – 6.8/10_____Rotten – 81%
ပုံပွငျတှထေဲကကွောကျမကျဖှယျရာတှကေို ညသနျးခေါငျမှာ ကွုံခဲ့ရတဲ့အဖွဈအပကျြ …. Holloween မှာရိုးရာမပကျြ တစ်ဆခွေောကျတာခံမလား မုနျ့ကြှေးမလားဆိုတဲ့ ကလေးတှရေဲ့နာကျပွောငျစကား… အမှတျတရဖွဈဖှယျကငျြးပခဲ့တဲ့မွို့ငယျလေးတဈမွို့မှာ တစ်ဆေ သရဲ အစဈတှနေဲ့ရငျဆိုငျတှခေဲ့ကွရတဲ့အခါမှာ… Trick ‘r Treat ရုပျရှငျဟာ 2007 မှာ ဒါရိုကျတာ Michael Dougherty ရေးသား ရိုကျကူးထားတဲ့ ကနဒေါ horror ရုပျရှငျဖွဈပါတယျ။ သရုပျဆောငျတှအေဖွဈ Baker, Brian Cox, Rochelle Aytes,Lauren Lee Smith, Leslie Bibb, နဲ့ Anna Paquin တို့ပါဝငျရိုကျကူးထားပွီး ဒီဇတျကားကို ဟောလိုးဝငျးနဲ့ဆကျစပျတဲ့ horror ဇတျလမျးတှကေိုအခွခေံထားပါတယျ။ တခွားသောဇတျလမျးအတျောမြားမြားလိုပါပဲ ဆမျရဲ့အဖွဈအပကျြတှနေဲ့ဇတျလမျးဆငျထားပါတယျ။ ဒီဇတျကားမှာလဲထုံစံအတိုငျး ဟောလိုးဝငျးရဲ့ရိုးရာစညျးမဉျြးတှကေိုဖောကျဖကျြတိုငျးပျေါလာတတျတဲ့ ရှဖေရုံသီးကွီးခေါငျးပျေါဆောငျးထားတတျတဲ့ လိမ်မျောရောငျဝတျစုံနဲ့ထူးဆနျးတဲ့ လူတဈယောကျပျေါလာပွီး လူတှကေိုဘယျလိုတှဖွေဈပကျြစခေဲ့သလဲဆိုတာ စိတျလှုပျရှားဖှယျ ရငျတဖိုဖိုနဲ့ကွညျ့ရမှာပါ……
(ဘာသာပွနျသူကတော့ Jean Nyi Ngal ဖွဈပွီးအညှနျးကိုတော့ Myo Myint Aung မှရေးသားပေးထားတာဖွဈပါတယျ)
ပုံပြင်တွေထဲကကြောက်မက်ဖွယ်ရာတွေကို ညသန်းခေါင်မှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက် …. Holloween မှာရိုးရာမပျက် တစ္ဆေခြောက်တာခံမလား မုန့်ကျွေးမလားဆိုတဲ့ ကလေးတွေရဲ့နာက်ပြောင်စကား… အမှတ်တရဖြစ်ဖွယ်ကျင်းပခဲ့တဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့မှာ တစ္ဆေ သရဲ အစစ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ကြရတဲ့အခါမှာ… Trick ‘r Treat ရုပ်ရှင်ဟာ 2007 မှာ ဒါရိုက်တာ Michael Dougherty ရေးသား ရိုက်ကူးထားတဲ့ ကနေဒါ horror ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် Baker, Brian Cox, Rochelle Aytes,Lauren Lee Smith, Leslie Bibb, နဲ့ Anna Paquin တို့ပါဝင်ရိုက်ကူးထားပြီး ဒီဇတ်ကားကို ဟောလိုးဝင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ horror ဇတ်လမ်းတွေကိုအခြေခံထားပါတယ်။ တခြားသောဇတ်လမ်းအတော်များများလိုပါပဲ ဆမ်ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဇတ်လမ်းဆင်ထားပါတယ်။ ဒီဇတ်ကားမှာလဲထုံစံအတိုင်း ဟောလိုးဝင်းရဲ့ရိုးရာစည်းမျဉ်းတွေကိုဖောက်ဖျက်တိုင်းပေါ်လာတတ်တဲ့ ရွှေဖရုံသီးကြီးခေါင်းပေါ်ဆောင်းထားတတ်တဲ့ လိမ္မော်ရောင်ဝတ်စုံနဲ့ထူးဆန်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ပေါ်လာပြီး လူတွေကိုဘယ်လိုတွေဖြစ်ပျက်စေခဲ့သလဲဆိုတာ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ရင်တဖိုဖိုနဲ့ကြည့်ရမှာပါ……
(ဘာသာပြန်သူကတော့ Jean Nyi Ngal ဖြစ်ပြီးအညွှန်းကိုတော့ Myo Myint Aung မှရေးသားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်)
Running Time : 1hr 22 minute
Genre : Horror,Thrill
Translator : Jean Nyi Ngal
Dylan Baker Lauren Lee Smith Quinn Lord Rochelle Aytes
Alberto Ghisi Amy Esterle Anna Paquin Barbara Kottmeier Brett Kelly Brian Cox Britt McKillip C. Ernst Harth Caroline Redekopp Catherine Barroll Christine Willes Connor Christopher Levins Derek McIver Dylan Baker Gerald Paetz Isabelle Deluce James Willson Jean-Luc Bilodeau Juan Carlos Velis Laura Mennell Lauren Lee Smith Leslie Bibb Matthew Kevin Anderson Moneca Delain Patrick Gilmore Quinn Lord Richard Harmon Rochelle Aytes Samm Todd Tahmoh Penikett Tatiana Anderson Troy Everett Ty Hill Wanda Ayala
Option 1 usersdrive.com 620 MB Blu-Ray 720p
Option2yoteshinportal.cc 620 MB Blu-Ray 720p
Option3yuudrive.me 620 MB Blu-Ray 720p
Option4filedwon.info 620 MB Blu-Ray 720p
Option5megaup.net 620 MB Blu-Ray 720p
Option6mega.nz 620 MB Blu-Ray 720p
Option7upstream.to 620 MB Blu-Ray 720p
The Amityville Horror (2005) 2005
Dead Rising:EndGame (2016)မြန်မာစာတန်းထိုး 2016
Ouija Seance: The Final Game (2018) 2018
Doctor Sleep (2019) 2019
Babysitter Wanted (2008) 2008
Ringu0(2000) 2000
Bliss (2019) 2019
Kelam (2019) 2019